नेपालबारे जानकारी चिनियाँ पर्यटकलाई » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपालबारे जानकारी चिनियाँ पर्यटकलाई
बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ १३:४१ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले चीनका प्रमुख पर्यटकीय स्थानमा ‘नेपाल–चीन पर्यटन प्रवद्र्धन मिसन’ सम्पन्न भएको छ ।
नाट्टाका अध्यक्ष तथा टोलीप्रमुख मधुसूदन आचार्यले पर्यटनको आदान–प्रदानबाट दुई देश बीचको विद्यमान मित्रता झन् बलियो हुँदै जाने बताउनुभयो ।
PREVIOUS POST Previous post: कक्षा ११ को परीक्षा पूरा तयारी
NEXT POST Next post: फ्युचरलाई जिल्ला लिग फुटबलको उपाधि
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ १३:४१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ १३:४१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ १३:४१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ १३:४१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, जेष्ठ ३१, २०७४ १३:४१